Fannaanad sumcad iyo taariikh ku lahayd Iswiidhen oo geeriyootey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Alice Babs oo la heeseysa fannaanka Bengt Hallberg 1963. Sawirle: Ragnhild Haarstad/TT.
Fannaanad sumcad iyo taariikh ku lahayd Iswiidhen oo geeriyootey
La daabacay onsdag 12 februari 2014 kl 10.05
Alice Babs oo ahayd heesaa ayaa talaadii shalay ku hoy lagu xannaaneeyo waayeelka hdimirka beela. Alice Babs waxay ahayd 90 sano jir.
- Si aan rafaad iyo silic lahayn ayey u naf-baxay iyadoo ay hareeraha ka fadhiyaan eheladeedu, ayuu qareenka qoysku Thomas Bodström u sheegay wargeyska Expressen.
Thomas Bodström wuxuu hadalkiisa ku daray in Alice Babs ay la xanuunsanayd cudurka Alzheimers oo ay ugu dambeyntii u geeriyootey. Sidaas awgeed ayey geerideedu ahayd mid la sugayey. Waxayna geeriyootey iyadoo ay eheladeedii la joogaan.
Waxay ahayd bishii sebteember ee 2012 kolkii ay gabadheeda Titti Sjöblom sheegtay in hooyadeed maskaxda dhiig uga furmay. Bishii Juun ee sannadkii 2013 ayuu qoysku ku dhawaaqay Alice Babs uu ku dhacay cudurka Alzheimers.
Alice Babs ayaa soo ahayd fannaanad iyo jilaa dadku wadajecel yahay. Waxay ku soo caanbaxday filinkii lagu magacaabi jirey "Swing it, magistern!" oo soo baxay sannadkii 1940, kolkaas oo ay Iswiidhen astaan uga noqotay muusigga nooca loo yaqaan Jazz. Sannadkii 1972 ayaa loo magacaabay in ay noqoto heesaaga boqortooyada oo ay noqotay fannaanaddii ugu horreysey oo aan ka socon masraxiyadda. Alice Babs waxay ku geeriyootey 90 sano jir.